May 18, 2020 - Lupyo News
သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး အချစ်ရေးနဲ့ လိင်ကိစ္စဆက်စပ်မှု ရှိလား
May 18, 2020 by Lupyo News
သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး အချစ်ရေးနဲ့ လိင်ကိစ္စဆက်စပ်မှု ရှိလား လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အချင်းချင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် လိင်တူပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ကြ ဆုံကြ ချစ်ကြိုက်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ အချစ်နဲ့တူတူ ဒွန်တွဲလာတာတစ်ခုကတော့ လိင်ကိစ္စပါ။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အချင်းချင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် လိင်တူပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ကြ ဆုံကြ ချစ်ကြိုက်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ အချစ်နဲ့တူတူ ဒွန်တွဲလာတာတစ်ခုကတော့ လိင်ကိစ္စပါ။ အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် လက်ထပ်ပြီး အချစ်နဲ့လိင်မှုကိစ္စ ဒွန်တွဲတာမျိုးက ဘာမှမထူးဆန်းပေမယ့် သမီးရည်းစားစုံတွဲတွေအတွက်တော့ အချစ်နဲ့လိင်ကိစ္စကြားက ဆက်စပ်မှုက မေးခွန်းထုတ်စရာကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ခုခေတ် လူငယ်လူရွယ်စုံတွဲတွေကြားမှာတော့ သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ အတူနေလိုက်ကြတဲ့ကိစ္စမျိုးက ထူးဆန်းတာတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် အချစ်က သက်သက်၊ လိင်ကိစ္စက သက်သက် တခြားစီပါပဲ။ ဒါက ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ချစ်သူရည်းစားဘဝကို ပုံမှန်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အတွဲတွေရှိနေတာက သက်သေပါပဲ။ … Read more
ပိုမိုအားကောင်းလာသော အမ်ဖမ်ဆိုင်းကလုံးမုန်တိုင်းသတင်း အမ်ဖမ်ဆိုင်းကလုံးမုန်တိုင်းကြီးသည် ၂၀၂၀ မေလ ၁၈ရက်နေ့ ည ၈နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန်မှာ တစ်နာရီ ၁၆၇မိုင်နှုန်းဖြင့် Cat5မုန်တိုင်းကြီအဖြစ်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိပြီး ၁၉ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ ၁၇၂မိုင်နှုန်းအထိတောင်တိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ် မုန်တိုင်းအဝန်းသည် ၁၅၀၀ကီလိုမီတာနီးပါးကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနှင့် အိန္ဒိယနယ်စပ်အနီးကို ဦးတည်နေပါတယ် မုန်တိုင်းအင်အားကြီးမားလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ဖွယ်မရှိသော်လည်း ၁၉ရက်နေ့မှ ၂၁ရက်နေ့အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာမိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ်… အခုမရွာလို့ မရွာဘူးမပြောကြပါနဲ့ ပေးထားတဲ့ရက်အတွင်း ရွာလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်… 18/05/2020 at 9:00pm (MMT) SU SU SAN ————————– unicode အမ္ဖမ္ဆိုင်းကလုံးမုန္တိုင်းကြီးသည် ၂၀၂၀ မေလ ၁၈ရက်နေ့ ည ၈နာရီ ၃၀မိနစ်အခ်ိန္မွာ တစ္နာရီ ၁၆၇မိုင်နွုန်ျးဖင့် Cat5မုန္တိုင်းကြီအျဖစ္တိုက္ခတ္လျွက်ရွိပြီး ၁၉ရက်နေ့မနက္ပိုင်းမွာ ၁၇၂မိုင်နွုန်းအထိတောင္တိုက္ခတ္လာနိုင္ပါတယ် မုန္တိုင်းအဝန်းသည် ၁၅၀၀ကီလိုမီတာနီးပါးက်ယ်ျပန့်လာခဲ့ပြီး … Read more
” အပျိုရင် သား နဲ့ အအို ရင် သား တို့ ကွာ ခြားချက်”
” အပျိုရင် သား နဲ့ အအို ရင် သား တို့ ကွာ ခြားချက်” (ဗဟုသုတ အ​နေဖြင့်​သာ) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ သဘာဝတရားက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ ရင်သားကို ပြုပြင်ပါတော့တယ်။ သည်အခါမှာ ရင်သားဟာ မူလကထက်လည်း ကြီးထွားလာပါတယ်။ အလေးချိန်အားဖြင့် တစ်ဖက်ကို တစ်ပေါင် နှုန်းလောက်အထိတောင် ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ အဲသလို ရင်သား ကြီးထွားလာလို့ ရင်သားမှာ အကြောပြတ်သလို အရာမျိုးတွေ ရှိလာတတ်တယ်။ (အပျိုပေမယ့် ၀လွန်း၊ ရင်သား ထွားလွန်းရင်လည်း အလားတူပဲ အကြောပြတ်တတ်တာကို သတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။) ဒါ့အပြင် ရင်သားများဆီကို သွေးပို့လွှတ်မှုကလည်း တိုးပွားလာတဲ့အတွက် ရင်သားပေါ်က သွေးကြောတွေရဲ့ အရောင် ပိုရင့်လာသလို မြင်လည်း ပိုမြင်သာလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နို့သီးခေါင်း အောက်ခြေက … Read more
အခေါင်းထဲမှအလောင်းကောင်က လက်ရမ်းပြနေသောဖြစ်ရပ်အား အမိအရ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့မိ(ရုပ်သံ)
အခေါင်းထဲမှအလောင်းကောင်က လက်ရမ်းပြနေသောဖြစ်ရပ်အား အမိအရ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့မိ(ရုပ်သံ) အသုဘအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ ရိုက်ကူးထားသောဗီဒီယိုထဲတွင် အခေါင်းထဲမှ အလောင်းကောင်က လက်ရမ်းပြနေသည့် ထူးဆန်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မာနာဒိုမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ထိုဗီဒီယိုထဲမှာတော့ အခေါင်းဘေးနားမှာဘုန်းတော်ကြီးက ဝတ်ပြုဆုတောင်းစာကို ကျယ်လောင်စွာဖတ်နေကာ ဘေနားမှာလည်းလူများစွာက စုဝေးနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ထိုဗီဒီယိုထဲက ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ ဆုတောင်းသံတွေကတော့ ” သမာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားရှင်ပြောကြားခဲ့တယ်။ငါသည် အသင်တို့ရဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ငါ့ကိုယုံကြည်သူများဟာ သေလွန်သော်လည်းပြန်လည်ရှင်သန်လိမ့်မည်” ဟုရွတ်ဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူမှာ ခေါင်းတလားရဲ့ အပေါ်ဘက်ကမှန်ဘောင်ပေါ်ကို ကင်မရာလှည့်ပြီး ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်တွင် အခေါင်းအတွင်းမှ လူသေကောင်လှုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ မေလ ၅ ရက်နေ့က ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အချို့တွေကတော့ အလောင်းကောင်ဟာ လှုပ်ရှားဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်မယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကို ရှင်းပြထားတာကတော့ သေဆုံးပြီး လူများရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင် … Read more
မိန်းခလေးတိုင်း အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ single mother ယဉ်ခိုင်(သဲသဲ)
မိန်းခလေးတိုင်း အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ single mother ယဉ်ခိုင်(သဲသဲ) 2.2.2010မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ် 24.1.2019မှာကွာရှင်းခဲ့ပီ(သူမနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ) 9နှစ်ပြည့်ဖို့၈ရက်ပဲလိုတော့တယ်. Anni Dateလဲမှတ်ထားမယ်မထင်…….. နှစ်ယောက်လုံးချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်. အစပိုင်းမှာအရမ်းတွေသာယာပီးအဆင်ပြေခဲ့တယ်. တပ်ထဲမှာနေရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ တပ်ထဲကသူတွေပဲသိတယ်. ခေတ်ရှေ့ပြေးပီးဖလန်းဖလန်းနေခဲ့တဲ့ကျမ တပ်ထဲမှာ အဘွားအိုလေးလိုနေခဲ့ရတယ်.အဆင်ပြေပါတယ် သူငွေသုံးကြမ်းတာလေးကလွှဲရင်ပေါ့. တဖြေးဖြေးသူ့အချိုးတွေပြောင်းလာခဲ့တယ်. ကျမကိုအရင်လိုဂရုမစိုက်တော့ဘူး. အိမ်လဲမကပ်တော့ဘူး ကျမအိပ်မှပြန်လာတတ်တယ်. တာဝန်ကျတဲ့နေရာက သူပုန်တပ်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဖာပွန်မှာပါ ခေါင်ပါတယ် အစားအစာလဲရှားတယ် မီးလဲအချိန်နဲ့ပါ့ ဖုန်းလဲမမိပါဘူး လိုင်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့တုန်းကပေါ့. ကျမနေရတဲ့အိမ်က တောင်ကုန်းပေါ်မှာအိမ်လုံးချင်းလေးတွေ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်ကပ်မနေဘူး. တစ်နေ့နေ့သူပြန်အလာကို အိမ်အကျယ်ကြီးထဲမှာ သရဲအရမ်းကြောက်တတ်တဲ့ကျမ ကလေးလေးကိုဖက်ပီး စာင့်နေခဲ့တယ်. သူပြန်မလာတဲ့ညတွေဆို ဘယ်လောက်ခြောက်ခြားခဲ့ရလဲကို့ဘာသာကိုအသိဆုံး. ဘတ်ထရီမီးကလဲတဖြေးဖြေးမှိန်မှိန်လာတယ် အပျင်းပြေစရာ သမီးလေးမျက်နှာပဲထိုင်ကြည့်ပီးမိုးလင်းခဲ့ရတယ်. အိမ်မှာအမေက ဘာမှမခိုင်းဘဲ ဘောကြော့နေလာတဲ့ကျမ ခုတော့ဟင်းချက်လဲကျမ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလဲကျမ အဝတ်လျှော်လဲကျမ ကလေးထိန်းလဲကျမ ကို့ကိုယ်ကိုတောင် အဲ့လောက်လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်မထင်ထားဘူး အိမ်အကူလဲခေါ်လို့မရ ရဲမေဆိုတာလဲ အမြလာမပေးနိူင်ဘူးလေ … Read more
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး ၁။ ပုဗ္ဗသန္နဝါသ – ရှေ့ဘဝ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ ၂။ ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏အကျိုးကို တစ်ဦးက စေတနာအပြည့်နှင့် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ အောက်ပါအချက်များနှင့် တူညီတဲ့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါက သမ္မသဒ္ဓါ – သဒ္ဒါတရားချင်းတူညီ သမသီလာ – အကျင့်ချင်းလည်းတူညီ သမစာဂါ – စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုချင်းလည်း တူညီ သမပညာ – အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်၊ ပညာချင်းလည်း တူညီမည်ဆိုပါက ဤ လင်မယား သည် ယခု ဘဝတွင် ကွဲကွာခြင်း မရှိသည့်အပြင် ယခုလက်ရှိဘဝတွင်သာမက နောက်ဘဝဆက်ဆက်တိုင်အောင် ၁ – အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ခြင်း ၂ – ကိုယ်ချမ်းသာ … Read more
ဘုရားသားတော် သံဃာတော်တွေဖြစ်တဲ့ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးမှအစ မနေ့ကမှဝတ်တဲ့ကိုရင်ငယ်အဆုံး သိမ်းကြုံးစော်ကားခံခဲ့ရပါပြီ
ဘုရားသားတော် သံဃာတော်တွေဖြစ်တဲ့ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးမှအစ မနေ့ကမှဝတ်တဲ့ကိုရင်ငယ်အဆုံး သိမ်းကြုံးစော်ကားခံခဲ့ရပါပြီ ။ #မိတ္ထီလာသမိုင်း_ရိုင်းလေပြီ ။ မြတ်ဘုရားသားတော် သံဃာတော်တွေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးမှအစ မနေ့ကမှဝတ်တဲ့ကိုရင်ငယ်အဆုံး သိမ်းကြုံးစော်ကားခံခဲ့ရပါပြီ ။ ထီလာသားတွေရေ…ထိုင်ကြည့်နေကြတော့မှာလား? ပို့စ်တင်စော်ကားသူ၏ Acc https://www.facebook.com/kyawwin.thant.5 ။ အခုတော့ ပိုစ့်ဖျက်သွားပါပြီ ။​တောင်းပန်စာ ရေးတင်ထားတာတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ကပ်ဆိုက်တာလဲမပြောနဲ့ အလကားနေရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကိုပဲ လာလာစော်ကားနေကြတာ။ မကိုးကွယ်ရင်နေပါ မယုတ်မာကြပါနဲ့။ မရိုင်းစိုင်းကြပါနဲ့။ ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကြောင့် ကပ်ဘေးဆိုတာတွေက ဖြစ်ပေါ်လာတာ…။ ဆုမတောင်းကောင်းပေမယ့် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ကပ်ရောဂါနဲ့ အတူ မင်းရဲ့အသက်လဲ ပါသွားပါစေ။ ပီးရင်လဲ ငရဲခန်းမှာ ထာဝရ နေသွားရပါစေလို့ #ပေသီး# ————————- unicode #မိတ်ထီလာသမိုငျး_ရိုငျးလပွေီ ။ မွတျဘုရားသားတျော သံဃာတျောတှကေို ပါခြုပျဆရာတျောကွီးမှအစ မနကေ့မှဝတျတဲ့ကိုရငျငယျအဆုံး သိမျးကွုံးစျောကားခံခဲ့ရပါပွီ … Read more
အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးလာနေပီ သတိထားကြပါ
အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးလာနေပီ သတိထားကြပါ လေတိုက်နှုန်း ၁၆၀ မိုင်နှုန်းဖြင့် Cat5စူပါမုန်တိုင်းကြီး အမ်ဖမ် လာနေပါပီ အားလုံးသတိထားကြပါ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အမ်ဖမ်မုန်တိုင်းသည် ၂၀၂၀ မေလ ၁၈ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန်တွင် လေတိုက်နှုန်း ၁၆၀မိုင်ဖြင့် အဖျက်စွမ်းအားအလွန်ကြီးမားတဲ့ Cat5အဆင့်ရှိမုန်တိုင်းကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်… 18/05/2020 at 2:10pm (MMT) SU SU SAN ရတနသုတ် ရွတ်ဖတ်ရခြင်း အကျိုး ကပ်ကြီးသုံးပါးကို ကျော်နင်းစေနိုင်သည်၊ စုန်း,တစ္ဆေ, ကဝေ ပယောဂဟူသမျှ ကိုနိုင်သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရသောအခါ အချုပ် ထောင် နှောင်အိမ်စသည်တို့၌ ကျရောက်နေသောအခါ အမြန်လွတ်မြောက်စေ နိုင်သည်။ နတ်ကောင်းနတ်မတ်တို့၏ စောင်မကြည့်ရှုခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပေ သည်။ ရတနသုတ် … Read more
၁၆.၅.၂၀၂၀ နေ့ ညက မူဆယ်ကလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရဲ့အဖြစ်
၁၆.၅.၂၀၂၀ နေ့ ညက မူဆယ်ကလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရဲ့အဖြစ် ၁၆.၅.၂၀၂၀ နေ့ ညက မူဆယ်ကလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် မမမ ၁၈.၅.၂၀၂၀ ၁၆.၅.၂၀၂၀ နေ့ ညက မူဆယ်ကလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် မြစ်ကြီးနားဘူတာမှာ သူ့ကို လာကြိုတဲ့သူက ယောကျာင်္းလေး ၅ ယောက်ရှိတယ် တခြားရပ်ကွက်ကခြားတွေပေါ့ အဲယောကျာင်္းလေး ၅ ယောက်က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မသိကြဘူး ကောင်မလေးကို လာကြိုကြတာတဲ့ ဘာတော်လဲ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေသေချာစိစစ်မေးတော့ လိုင်းပေါ်က သိတာတဲ့ ၅ ယောက်လုံးက ကောင်မလေးက လည်တယ် ၅ ယောက်လောက် ချိတ်ထားတာ တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်တော့ သေချာလောက်တယ်ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ အခုတော့ ၅ ယောက်လုံးနဲ့လွှဲတော့ Qဝင်ရပြီ လိုင်း ဒုက္ခသည်များ ဘယ်ကို သွားမယ် … Read more
အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တာလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး
အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တာလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးရဲ့ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက် ပီးခဲ့တဲ့နှစ် နှောင်းပိုင်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတင်းမီဒီယာတွေထက်မှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၁၀)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးကြောင့် (၁၃)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကောင်မလေးကို ဆေးပညာရှင်တွေက သေချာ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ တကယ်ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်အရ ဆယ်နှစ်ကောင်လေးဟာ ကလေးရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရွယ်ကို မရောက်သေးဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ဒေါက်တာတွေက ဒီကိုယ်ဝန်ဟာ တခြားသူကြောင့် ဖြစ်ရမယ်၊ ဒီ(၁၀)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးကြောင့် လုံးဝ မဟုတ်ဘူးလို့ ယတိပြတ် ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက လူငယ်ကလေးပီပီ နာမည်ကြီးချင်လို့ “၁၃ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ ကောင်မလေး”ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ပရိသတ်စုဆောင်းကာ နာမည်ကြီးဖို့အရေး … Read more